कथा : हाउस वार्मिंग पार्टी – MySansar
कथा : हाउस वार्मिंग पार्टी
Posted on December 24, 2016 December 24, 2016 by mysansar
– गोविन्द गिरी प्रेरणा –
परिवेश थापा हातमा रहेको कपको सेलाइसकेको कफीको चुस्की लिंदै विगतमा हराउन थाल्यो ।
त्यहाँ एकाध महिना वसेपछि उसले कसरी त्यहाँवाट उम्किने, त्यो दाउ खोज्ने अभियान छेड्नु प¥यो । कारण सरल थियो, ती आफन्तको जागिर एयरपोर्ट भन्सारमा थियो र रातदिन नोटको विटा ल्याउने र होटलमा वास वस्ने वानी भएको थियो । यौटा नोटको विटो स्वास्नीको हातमा सुम्पेपछि उसले त्यसवापत एकाध दिन होटलमा वसे पनि अर्थात घरमा वास वस्न नआए पनि गुनासो हुन्नथ्यो । पछिपछि त घरमा भन्दा घर वाहिर वास वढी हुन थालेको वेला परिवेश त्यो घरमा शरण लिन पुगेको थियो ।
चिवेचरीको झैं चिरविरे स्वरकी म्याडमको उदासीलाई साम्य पार्न परिवेशले भन्यो, त्यत्रो कमाई गर्ने गर्ने सरलाई किन दुखी वनाउनु हुन्छ ?
म्याडमले त्यसपछि उसको हात समातेर सोधेकी थिइन्, अनि मभित्र उग्र भइरहेको आगो कसले शान्त पार्छ नि ?
अचानक एकदिन राती घर आइपुग्दा राजकुमार दम्पत्ती मारामार झगडा गरिरहेका थिए । लोग्ने निकै पिएर आएको वुझिन्थ्यो, उ लर्वरिएको आवाजमा भन्दै थियो, मलाई नामर्द ठानेकी राँड तैंले ? नाठो खेलाएर रमाएकी , तेरो म रगत पिउँछु, इत्यादि।
यसो अलिकति पिउँदै गफगाफ गर्न मन लागेर हो…उसले भनेको थियो ।
त्यसपछि दुवै वाहिर निस्केका थिए र हाफ वोतल ह्विस्की , सोडा , दालमोठ र ड्र«ाई मिट किनेर फर्केका थिए ।
होइन कफीमै अल्झने हो कि पार्टीमा जान तयार हुने हो हजुर ?
विन्द्यवासिनीको वोलीले परिवेश झस्कियो । उ विस्मृतिको काठमाडौंवाट एक्कासी अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको फल्सचर्चमा आइपुग्यो ।
मलाई त पार्टीमा जान पटक्क जाँगर चलेको छैन, वासिनी । उसले विन्द्यवासिनीलाई भन्योें ।
मौका वेमौकामा नचाहिने धक्कू लगाएपछि यस्तै हुन्छ । तर हामी मात्र होइन यो स्थिति भोग्ने । साराका साराको हाल उही फटेहाल हो क्यारे । के नेपाली , के जापानी, के कोरियन, के भारतीय, के अमेरिकन सवै उस्तै भएपछि केको लाज, केको धक ?
उ केही नवोली चूप लागिरह्यो ।
वासिनीले उसको गाला मुसार्दै भनी, हजुरको सुख दुखमा साथ दिने वासिनी भएपछि के को चिन्ता ? ल छिटो तयार हुनोस् म मेकअप सकिहाल्छु । यति भनेर वासिनी मेकअपका लागि अर्काे कोठातिर लागी र उ पुनः एक्लो भयो ।
वास्तवमा उसलाई म्याडमको पंजावाट छुटकारा दिलाएर अमेरिका ल्याउने वासिनी नै थिई, यद्यपि आजपर्यन्त वासिनी यो तथ्यवाट वेखवर छे ।
झण्डै मध्यरातमा रितुले भनेको थियो, यार एकछि वाहिर हावा खाएर आउँ, सारै औडाहा भयो ।
वास्तवमा समयको खेललाई मान्नुपर्छ, म तपाईंलाई यौटा कुरा भन्न चाहन्थें, तपाईंलाई मेरो कोठामा निम्त्याउन चाहन्थें । तर तपाईं आफै मेरो कोठामा आएर ठूलो संकट टारिदिनुभयो । रितुले भन्यो ।
म क्यै कुरा नवुझेर छक्क परेको थिएँ ।
वास्तवमा तपाईं भनेपछि हुरुक्क हुने यौटी कन्या छिन् । रितुवर्णले यसरी कुराको उठान गरेको थियो ।
को होली त्यो अभागिनी । परिवेशले हाँस्दै भनेको थियो । यसो भन्न उसले पिएको ह्विस्कीको पनि अलिकति योगदान हुँदो हो ।
जो भए पनि राम्री कन्या हो । सुशिल कन्या हो । तपाईं भनेपछि हुरुक्क हुने कन्या हो । रितुले भनेको थियो ।
परिवेश रितुको कुराले आश्चर्यको भूमरीमा परेको अनुभूत गर्दै थियो ।
त्यो कन्याको प्रस्ताव स्वीकार्ने हो भने तपाईको जीवनले नयाँ आयाम पाउँछ । उसले भनेको थियो ।
यो त कुन ठूलो कुरा भयो र । उसको छातीमा यो जवाफ उम्रेको थियो । तर ओठमा आइसकेको थिएन ।
त्यो कन्यालाई स्वीकार्नु भनेको अमेरिका जाने भिषा लाग्नु हो । रितुले सुस्तरी भनेको थियो ।
कसरी ? परिवेशले सोधेको थियो ।
अघिसम्म त परिवेश ठट्टाको मूडमा थियो र सवथोक हल्का रुपमा लिई रहेको थियो, तर यो कुराले भने उसले पिएको ह्विस्कीको नशा स्वात्तै वेपत्ता पारिदिएको थियो ।
तपाईंको कुरा म भोली दिउँसो उनीकहाँ पुर्याउन सक्छु । रितुले भनेको थियो ।
परिवेश अक्क न वक्क भएको थियो ।
तर के सुत्नु नि, रितुको कुराले परिवेशको निद्रा वेपत्ता भएको थियो । रातभर निद्राको ठाउँ छटपटीले लिएको थियो ।
परिवेशको निद्रा वेपत्ता पार्ने त्यो कन्या अरु कोही नभई विन्द्यवासिनी थिई ।
विन्द्यवासिनीले अन्तिम वाक्य यसो भनेकी थिई, भोलि अमेरिका गएर दुःख पाएँ भनेर मलाई दोष दिन पाउनुहुन्न नि ।
उसलाई लागेथ्यो, अमेरिका मन नपरेर गाली गर्ने को मूर्ख होला ।
त्यस्तो हुँदैन । उसले यत्ति मात्र भनेको थियो प्रकटमा ।
उसले मेरो सामान्य पृष्ठभूमि थाहा पाएकीले मन पराउन सजिलो भयो भने म्याडमको चक्रवाट छुटकारा पाएर अमेरिका पुग्न पाउनुले परिवेशलाई सकारात्मक निर्णय गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
अमेरिका आउने वित्तिकै परिवेशले यौटा फाष्ट फूडमा काम पाएको थियो र एकै वर्षमा असिष्टेण्ट म्यानेजर हुने मौका पाएको थियो ।
वासिनीले पनि नेल्समा काम पाएकी थिई ।
हो यसैवीच रितेश शर्मासँग परिवेशको परिचय भएको थियो ।
दशवटा काम गरेर अमेरिका पचाइसकेको रितेश अहिले घर जग्गा किनवेच गर्ने रियाल्टर भएको थियो । अनि दुईचार दिन विराएर उ एपार्टमेण्टमा आएर गफ लाउँथ्यो र भन्थ्यो, हैन तपाईहरु घर किन्ने होइन ? हेर्नाेस्, अहिले मौकामा घर किन्नु भो भने एक वर्षमै पचासौं हज्जार नाफा हुन्छ ।
हेर्नाेस्, पैसा चाहिंदै चाहिन्न । यसो ५।७ हजार भए भैहल्छ । रितेशले भनेको थियो ।
यति सजिलै घर पाइन्छ भने त किन नकिन्नु नि । मैले अलिकति जम्मा पारेकी छु , तपाईं पनि अलिकति खोज्नोस्, अमेरिकामा घर मालिक हुन पाईने अवसर किन गुमाउने ? वासिनीले भनेकी थिई ।
त्यसपछि घर हेर्ने सिलसिला चलेको थियो ।
ल घर मन परेको भए आँट्नु होस्, रेल स्टेशनको नजिक यति मजाको घर १५ हजार इक्विटी सहित पाउनु भाग्यै हो । राम्रै भाग्य रहेछ तपाईंहरुको । अलिक टेढो तरिकाले मुख वँग्याउँदै रितेशले भनेको थियो र विदा हुँदै उसले भनेको थियो, हिरा पाइएको छ क्यारे, लिन मिल्ने नमिल्ने तपजईंहरुको सोचमा भर पर्छ । म भोलि आउँला घर सल्लाह गर्नु होला ।
हैन घर किन्दै १५ हजार डलर नाफा रे, विचित्रै होइन त यो ?परिवेशले भनेको थियो ।
अर्काे दिन रितेश आउँदा उनीहरु घर किन्नका लागि तयार भैसकेका थिए ।
रितेशले घर मूल्याँकन, घर निरिक्षण , घरको लागि ऋण सवका लागि दौडधूप गरेको थियो । उनीहरुको आम्दानीले ऋणका लागि अपुग भयो । रितेशलेनै यौटा कम्पनीमा पार्ट टाइम काम गरेको देखाएर त्यो समस्याको समाधान गरिदियो ।
वासिनी र परिवेश दंग थिए, सारा कुरामा रितेशले सहयोग पु¥याएको थियो । उनीहरु भन्थे, यो रितेशले त देवदूतको रुपमा हामीलाई सहयोग पु¥याउन गोलोकवाट आएको हो ।
विहानको चियादेखि रातीको खाना पनि रितेशले उनीह्रुकहाँ नै खान्थ्यो, अविवाहित थियो, मनमौजी थियो ।
घर पास गर्नेदिनसम्म रितेश परिवेश वा वासिनीलाई कतै जान परे आफ्नै कारमा पु¥याउने ल्याउने गरिदिन्थ्यो । रितेशको सहयोगले उनीहरु कृतकृत्य भएका थिए ।
घर पास भयो । अव उनीहरुको हातमा अमेरिकाको घरको साँचो थियो ।
अमेरिकामा यसरी आफ्नो घर भएपछि यो पार्टी भन्ने के ठूलो कुरा हो र । परिवेशले भन्यो । पार्टी त गर्नैपर्छ । वासिनीले पनि भनी ।
पार्टीमा पेयले रौनक वढाएको थियो । हातहातका गिलास स्वत स्फूर्त छचल्किन थालेपछि परिवेश झन् छचल्किन थालेको थियो । घर भनेको घरै हो, एपार्टमेण्ट भनेको एपार्टमेण्ट नै हो भनेर दुइचार चोटी दोहो¥याउन थालेपछि एकाध निम्तालुहरुले मुख कुच्याउन थालेका थिए र वासिनीले पाखुरामा समातेर एउटा कुनामा लगेकी थिई र मायालु प्रकारले हपारेकी थिई, हजुरलाई रक्सी लाग्यो कि क्याहो, एउटै कुरा कति दोहो¥याउनु भएको । सवैले नराम्रो मानेका छन् । रेष्टरुममा गएर यसो फ्रेस भएर आउनु होस्, अनि डिनर शुरु गर्ने ।
घर सरेपछि उनीहरुले पहिलो किस्ता डेड महिनामा तिरेका थिए । त्यसपछि हरेक महिना किस्ता, विजुलीको वील, तीन महिनामा होम ओनर्स एसोसिएसनको दस्तुर, पानीको वील आउन थालेको थियो । सवै रकमको जोड र उनीहरुको कमाइको जोडवीच कम अन्तर देखा पर्न थालेको थियो र परिवेशले पार्ट टाइम काम थालेको थियो ।
वासिनीले पनि अतिरिक्त काम थालेकी थिई ।
केही महिनापछि घरको कर तिर्नु पर्ने चिट्ठी आयो । केही दिनमा घरको विमा नविकरणका लागि चिट्ठी आयो । र त्यसभन्दा डरलाग्दो कुरा उनीहरुको घरको मजवूत हिटिंग सिस्टमको मेसिन वन्द भयो र मर्मतका लागि कुरा वुभm्दा मेसिन पुरानो भएकाले फेर्नुपर्ने र त्यसका लागि पाँच हजार डलर लाग्ने देखियो ।
अव के गर्ने ? परिवेशको मनले सोध्थ्यो ।
अव के गर्ने ? वासिनीको मनले सोध्थ्यो ।
हामीले यसरी सुत्न नपाएको पनि कति धेरै भएछ हगी ? वासिनीले भनी ।
हो त नि हगी ? परिवेशले भन्यो ।
हामीले ढुक्कले प्रेम नगरेको पनि कति भैसक्यो हगी ? परिवेशले वासिनीको कपाल मुसार्दै भन्यो ।
त्यही त भन्या । वासिनीले परिवेशको छातीमा मुण्टो गाड्दै भनी ।
निकै वेर उनीहरु अँगालोमा गुजुल्टिरहे मानौं उनीहरुको विहा भर्खरै भएको हो, पिरतीको उदात्तता भर्खरै आरम्भ भएको हो ।
वासिनी यौटा कुरा भनौं ? परिवेशले सोध्यो ।
भन्नुस न । वासिनीले भनी ।
हाम्रो प्रेममा तगारो, हाम्रो सुखको तगारो, शान्तिको तगारो यो घर घाँडो भो हगी ? परिवेशले भन्यो ।
मैले पेटमा भएर पनि मुखले भन्न नसक्या कुरा यही त हो नि । वासिनीले भनी ।
कतिले घर छाड्दा रहेछन्, हामी पनि छाडौं न, के भो त ? वासिनीले भनी ।
लाज हुन्न ? परिवेशले भन्यो ।
कति अमेरिकन, इण्डियन, पाकिस्तानी, वंगाली, स्प्यानिस लाई लाज नहुने, हामी नेपालीलाई लाज हुने ? लाजले पैसाको संकट टार्ने होइन क्यारे । वासिनीले भनेकी थिई ।
लौ अझै के गम खाएर वस्नु भा, भन्दै वासिनी परिवेश सामु झुल्किई ।
ल म तयार भैहालें भनेर उ रेष्टरुमभित्र छि¥यो र केहीवेरमै फ्रेस भएर निस्कियो अनि कपडा वदल्न थाल्यो ।
दुवै तयार भएर निस्कदा साँझले आफ्नो अनुहार देखाइसकेको थियो ।
मै चलाउँछु कार, भरे फर्कदा मैले नै चलाउनु पर्ने हो क्यारे । वासिनीले भनी ।
लौ तिम्रै इच्छा । परिवेशले जवाफमा भन्यो ।
तर गाडी चलाउन पर्दैन भनेर धेरै पिउने होइन नि राजा, वासिनीले हाँस्दै भनी ।
हुन्छ । परिवेशले यत्ति भन्यो ।
कुरा पनि कम गर्ने है । वासिनीले फेरि भनी ।
म वोल्दै वोल्दिन । परिवेशले भन्यो ।
नवोले त लाटो भन्छन् नि प्यारा । वासिनीले भनी ।
त्यसो भए अलिअलि वोलौंला । परिवेशले भन्यो ।
यतिन्जेल उनीहरु कारमा वसिसकेका थिए र वासिनीले टोयोटा कोरोलाको २००० मोडेलको कार मज्जाले हुईंक्याइसकेकी थिई ।
उनीहरु पुग्दा पार्टी जम्न शुरु भैसकेको थियो । परिवेशले हातमा लिएको एक वोतल वाइन स्मृति भाउजुको हातमा राखिदिंदै भन्यो, अवेर त भइएन नि भाउजु ?
अलिअलि अवेर भैहाल्यो नि, यसको क्षतिपूर्ति अलि अवेर वसेर चुक्ता गर्नुपर्छ । स्मृति भाउजुले हाँस्दै भनिन् ।
कोही तलमाथि गर्दै घर निरिक्षण गर्दै थिए ।
कोही हातमा गिलास खेलाउँदै पिउनुको आनन्दमा झुम्दै थिए ।
परिवेश पनि हातमा ह्विस्कीको गिलास लिएर चुस्की लाउँदै यताउता घरको भित्री भागहरु हेर्न थाल्यो ।
सुगम घर हेर्न चाहनेलाई तल माथि, भित्र वाहिर गर्दै थियो र घरको कहानी पनि वताउँदै थियो, घर सानै छ, हामीलाई पुग्ने छ ।
कसैले सोध्यो, घर राम्रो समयमा किन्नु भो । हेर्नाेस्, आफू त भाउ अकासिएको वेलामा परियो, निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
सुगमले भन्यो, हेर्नाेस्, यो सव अर्थतन्त्रको कुरा हो । भोली यो अर्थतन्त्र अझै ओरालो पनि त लाग्न सक्छ, कस्ले भन्न सक्छ, जाँदैन भनेर ।
अर्काेले भन्यो, एपार्टमेण्टको भाडा भन्दा त मोरगेज कमै होला नि ?
त्यसो भए तपाईं नाफामै हुनुहुन्छ । अर्काेले वतायो ।
लौ गिलास मात्र लिएर भएन नि , स्न्याक्स पनि लिनु प¥यो, ल म ल्याइदिन्छु । यति भनेर सुगम उसलाई स्न्याक्स लिन गयो ।
वास्तवमा परिस्थितिले नराम्रोसँग लात हानेको थियो । उ र उजस्तै थुप्रैलाई लात हानेको थियो । अझ भनौैं टाठा वाठा भएर हतारहतार घर किन्नेहरु सवै थलिएका थिए र सोझासाझाहरुको दिन फिरेको थियो ।
वासिनी थुप्रैसँग हाई हल्लो गर्दै कुराकानीमा व्यस्त थिई । परिवेश भने एउटा कुनामा वसेर एकोहोरो ह्विस्की पिएर आफैमा हराइरहेको थियो ।
अनि तपाईंको रियाल्टर चाहीं को नि ? कसैले सोध्यो ।
रितेश । रितेश शर्मा । उसले जवाफ दियो ।
न्यूयोर्क गएका रहेछन्, वाल्टिमोर आइपुगें भनेको आधा घण्टा भयो, अव एकाध घण्टामा आई पुग्छन् । यसपल्ट स्मृति भाउजु वोलिन् ।
परिवेश अचानक अट्टहास गरेर हाँस्न थाल्यो ।
वातावरणमा एक्कासी सन्नाटा छायो । सव चूप लागे ।
हतारिंदै वासिनी परिवेश छेउ पुगी, के भो ? उसले सोधी ।
अव खाना खाउँ । वासिनीले परिवेशको कानमा भनी ।
अव एक पेग लिन्छु, लास्ट पेग । अनि जाने । परिवेशले भन्यो ।
सुगम यताउता गर्न थाल्यो केहीवेर र उद्घोषणा ग¥यो, अव डिजे शुरु हुन्छ ।
सवैले ताली वजाए र गीत शुरु भो । नाच शुरु भो ।
अव आगन्तुकहरु कोही आइरहेका थिएनन् र जान खोजेकाहरु पनि रोकिएका थिए डिजेले गर्दा ।
डिजे नृत्य सकिएपछि सवैजसो थकित भए झैं खुइय गर्दै वसे । वासिनी पनि वसी ।
परिवेश वासिनी छेउ पुग्यो र भन्यो, वासिनी जाउँ ।
हुन्छ । यत्ति भनी वासिनीले ।
हैन, केक नखाई कहाँ हुन्छ ? अव केक काट्ने वेला भैहाल्यो । सुगमले भन्यो ।
परिवेशले जुत्ता लगायो ।
वासिनीले पनि लगाई ।
सुगम र स्मृति ढोकासम्म पु¥याउन आए ।
वासिनीले परिवेशको यौटा हात समातेकी थिई ।
स्मृतिले सुगमको हात समातेकी थिई ।
परिवेश र सुगमले विदाइका हात मिलाए ।
हात मिलाउँदै परिवेशले भन्यो, त्यो गुनिलो भाई त आएन नि हगी ?
सुगम र स्मृतिले मुखामुख गरे ।
परिवेशले हाँसेर भन्यो, अव उसको आउने कामै छैन किन आउँथ्यो ? अव उ कहिल्यै आउँदैन ।
यत्ति भनेर सुगमको हात छाडेर परिवेश गाडी पार्किंग गरेको ठाउँतिर लम्कियो ।
(यो कथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समकालीन साहित्यमा पूर्व प्रकाशित बैसकेको हो । लेखकको सम्पर्क ईमेल [email protected] हो । लेखक सन् २००४ देखि अमेरिकामा वसोवास गर्दै आएका छन् ।)
1 thought on “कथा : हाउस वार्मिंग पार्टी”
माइसंसारमा कथा लेख्दै गर्नुहोला